को हुन् छठ माता ? छठी मैयाँको ब्रत किन बस्ने ? « Salleri Khabar
को हुन् छठ माता ? छठी मैयाँको ब्रत किन बस्ने ?
छठी माता को हुन्, उनको स्वरुप कस्तो छ तथा उनको पूजा गर्नाले भक्तहरुलाई केके आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराप्रति अनभिज्ञ छन् । को हुन् छठ माता :
कात्यायनी माता नै हुन छठी मैयाँस् पुराणहरुमा छठी मैयाँको एक नाम कात्यायन पनि हो । उनको पूजा दशैंको नौ रथाको षष्ठी तिथिमा पनि गरिन्छ । सिंहमाथि सवार कात्यायनीका चार वटा हातहरु छन् । उनको बायाँ हातमा कमलको फूल तथा तलवार धारण गरेकी छिन् भने दाहिने हातमा अभय तथा वरद मुद्रामा रहन्छन् ।
सूर्यकी बहिनी हुन् छठी मातास् धार्मिक मान्यता के पनि छ भने छठ माता भगवान सूर्यकी बहिनी हुन् । छठ मातालाई प्रसन्न गर्नका लागि सूर्य देवलाई विधि-विधान अनुसार पूजा-अर्चना गरिन्छ ।